နားတစ်ဖက်က ယား​နေသလို့ ကြည့်လိုက်ချိန်မှာမှ နားကြပ်ထဲမှာအမွေးထူပြီးအဆိပ်ပြင်းတဲ့ပင့်ကူကို တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ် (ရုပ်သံ) - Mckzone Daily
ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ Olly Hurts ဟာသူ့နားမှာယားနေတဲ့အရာတစ်ခုခုခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက် အလုပ်မှာအာရုံစူးစိုက်ဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Hurts ဟာ သူ့နားကြပ်တွေကိုချွတ်လိုက်ပြီးနောက် သူရဲ့နားကြပ်တစ်ဖက်ထဲမှာ ပင့်ကူတစ်ကောင်ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။Hurts မြင်ခဲ့တဲ့အရာဟာ တချို့သူတွေအတွက်အိပ်မက်ဆိုးလိုဖြစ်နေနိုင်ပေမဲ့ သူကနည်းနည်းလေးတောင်မကြောက်ခဲ့ပါဘူး။”ကျွန်တော်လုံးဝသိတယ်၊ ငါ့နားထဲမှာယားနေတဲ့အရာတစ်ခုခုခံစားမိတယ်။Hmm အလကား! “ဟုဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမျှဝေခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ Hurts ဟာ arachnidပင့်ကူထွက်သွားအောင်နားကြပ်ကိုလှုပ်ခါခဲ့ပေမဲ့ပင့်ကူကရွေ့တောင်မရွေ့ခဲ့ပါဘူး။”ပင့်ကူကအပြင်ကိုထွက်မလာချင်ဘူး။သူကအဲဒီနေရာမှာပျော်ရွှင်နေတယ်”ဟု Hurtsက ဆိုထားပါတယ်။
ဩစတြေးလျရှိအဆိုပါပင့်ကူတွေဟာ အဆိပ်ပြင်းမုဆိုးပင့်ကူ သို့မဟုတ် ဧရာမဂဏန်းပင့်ကူ လို့ခေါ်ကြပြီး အိမ်နံရံ ဒါမှမဟုတ် ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်တွားသွားတတ်တဲ့ အမွေးထူပြီးအဆိပ်ပြင်းတဲ့ပင့်ကူလို့လည်းလူသိများပါတယ်။အမတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ များသောအားဖြင့် ၂ စင်တီမီတာအရှည်ရှိပြီးအထီးတွေမှာ ၁.၆ စင်တီမီတာသာရှိကြောင်းဩစတြေးလျပြတိုက်အဆိုအရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ခြေထောက်ဟာ ၁၅ စင်တီမီတာ သို့မဟုတ် ၆ လက်မအထိရှိပါတယ်။သူတို့ဟာအင်းဆက်ပိုးမွှားတွေနဲ့အခြားကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါတွေကို ဖမ်းယူစားသုံးကြပြီး ဧရာမဂဏန်းပင့်ကူတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် အန္တရာယ်မရှိဟုယူဆထားကြပေမဲ့လည်း အဆိပ်ပြင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးအကိုက်ခံရရင် မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ကိုလည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုအဆုံးမှာတော့ Hurtsက မကြောက်မလန့်နဲ့ရယ်မောပြီးနားကြပ်ကိုမြေပေါ်ပစ်ချလိုက်ပါသေးတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဟာ”အိုး .. ဘုရားဘုရား..ငါဆိုအော်ဟစ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဝေးရာကိုပြေးထွက်သွားမိလိမ့်မယ်”၊”ခင်ဗျားရဲ့နားကြပ်ထဲကအရာကိုမြင်တဲ့အခါ ခင်ဗျားနှလုံးရောဂါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုအံ့သြမိတယ်”၊”နားကြပ်အသစ်တွေဝယ်ပြီး ပင့်ကူကိုသူ့အိမ်အသစ်ဆောက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါ”စတဲ့ မှတ်ချက်များစွာကိုပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ဩစတြေးလျအဆိပ်ပြင်းပင့်ကူဟာ Hurtsကို ကိုက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ပြီးသာမန်အားဖြင့်ပင့်ကူတွေဟာ ရန်လိုခြင်းထက် ထွက်ပြေးတာ၊ပုန်းနေတတ်တာကို ပိုပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဩစတွေးလနြိုငျငံသားဖွဈတဲ့ Olly Hurts ဟာသူ့နားမှာယားနတေဲ့အရာတဈခုခုခံစားခဲ့ရတဲ့အတှကျ အလုပျမှာအာရုံစူးစိုကျဖို့ခဲယဉျးခဲ့ပါတယျ။ဒါကွောငျ့ Hurts ဟာ သူ့နားကွပျတှကေိုခြှတျလိုကျပွီးနောကျ သူရဲ့နားကွပျတဈဖကျထဲမှာ ပငျ့ကူတဈကောငျရှိနတောကိုတှလေို့ကျရပါတယျ။Hurts မွငျခဲ့တဲ့အရာဟာ တခြို့သူတှအေတှကျအိပျမကျဆိုးလိုဖွဈနနေိုငျပမေဲ့ သူကနညျးနညျးလေးတောငျမကွောကျခဲ့ပါဘူး။”ကြှနျတျောလုံးဝသိတယျ၊ ငါ့နားထဲမှာယားနတေဲ့အရာတဈခုခုခံစားမိတယျ။Hmm အလကား! “ဟုဆိုခဲ့ပါတယျ။သူမြှဝခေဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုတဈခုမှာ Hurts ဟာ arachnidပငျ့ကူထှကျသှားအောငျနားကွပျကိုလှုပျခါခဲ့ပမေဲ့ပငျ့ကူကရှတေ့ောငျမရှခေဲ့ပါဘူး။”ပငျ့ကူကအပွငျကိုထှကျမလာခငျြဘူး။သူကအဲဒီနရောမှာပြျောရှငျနတေယျ”ဟု Hurtsက ဆိုထားပါတယျ။
ဩစတွေးလရြှိအဆိုပါပငျ့ကူတှဟော အဆိပျပွငျးမုဆိုးပငျ့ကူ သို့မဟုတျ ဧရာမဂဏနျးပငျ့ကူ လို့ချေါကွပွီး အိမျနံရံ ဒါမှမဟုတျ ပလကျဖောငျးတှပေျေါတှားသှားတတျတဲ့ အမှေးထူပွီးအဆိပျပွငျးတဲ့ပငျ့ကူလို့လညျးလူသိမြားပါတယျ။အမတှရေဲ့ခန်ဓာကိုယျဟာ မြားသောအားဖွငျ့ ၂ စငျတီမီတာအရှညျရှိပွီးအထီးတှမှော ၁.၆ စငျတီမီတာသာရှိကွောငျးဩစတွေးလပြွတိုကျအဆိုအရသိရပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သူတို့ရဲ့ခွထေောကျဟာ ၁၅ စငျတီမီတာ သို့မဟုတျ ၆ လကျမအထိရှိပါတယျ။သူတို့ဟာအငျးဆကျပိုးမှားတှနေဲ့အခွားကြောရိုးမဲ့သတ်တဝါတှကေို ဖမျးယူစားသုံးကွပွီး ဧရာမဂဏနျးပငျ့ကူတှဟော ယဘေုယအြားဖွငျ့ အန်တရာယျမရှိဟုယူဆထားကွပမေဲ့လညျး အဆိပျပွငျးနဆေဲဖွဈပွီးအကိုကျခံရရငျ မကောငျးတဲ့အကြိုးဆကျကိုလညျးခံစားရနိုငျပါတယျ။
ဗီဒီယိုအဆုံးမှာတော့ Hurtsက မကွောကျမလနျ့နဲ့ရယျမောပွီးနားကွပျကိုမွပေျေါပဈခလြိုကျပါသေးတယျ။အဆိုပါဗီဒီယိုကိုကွညျ့တဲ့အငျတာနကျအသုံးပွုသူတှဟော”အိုး .. ဘုရားဘုရား..ငါဆိုအျောဟဈပွီးတော့သူတို့နဲ့ဝေးရာကိုပွေးထှကျသှားမိလိမျ့မယျ”၊”ခငျဗြားရဲ့နားကွပျထဲကအရာကိုမွငျတဲ့အခါ ခငျဗြားနှလုံးရောဂါမဖွဈခဲ့ဘူးဆိုတာကိုအံ့သွမိတယျ”၊”နားကွပျအသဈတှဝေယျပွီး ပငျ့ကူကိုသူ့အိမျအသဈဆောကျခှငျ့ပွုလိုကျပါ”စတဲ့ မှတျခကျြမြားစှာကိုပေးခဲ့ကွပါတယျ။ကံကောငျးထောကျမစှာနဲ့ ဩစတွေးလအြဆိပျပွငျးပငျ့ကူဟာ Hurtsကို ကိုကျဖို့တှနျ့ဆုတျနခေဲ့ပွီးသာမနျအားဖွငျ့ပငျ့ကူတှဟော ရနျလိုခွငျးထကျ ထှကျပွေးတာ၊ပုနျးနတေတျတာကို ပိုပွုလုပျတတျကွပါတယျ။
Be the first to comment on "နားတစ်ဖက်က ယား​နေသလို့ ကြည့်လိုက်ချိန်မှာမှ နားကြပ်ထဲမှာအမွေးထူပြီးအဆိပ်ပြင်းတဲ့ပင့်ကူကို တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ် (ရုပ်သံ)"